मिलन पाण्डेको टिप्पणी– रवीन्द्र मिश्र नेपाली राजनीतिका छोटे हिट्लर हुन्
काठमाडौं, १५ चैत । विवेकशिल साझाँपार्टी नेता मिलन पाण्डेले रवीन्द्र मिश्र नेपाली राजनीतिका छोटे हिट्लर भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । साथै, उनले रवीन्द्र मिश्रले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई पार्टी अफिसमा प्रवेशमा रोक लगाएर पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘आज रवीन्द्र मिश्रले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई […]
काठमाडौं, १० चैत्र । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश गर्ने छलफल अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । उनले पार्टी एकताको सन्देश दिन नाम र चुनाव चिन्हमा ध्यान दिएका छन् । राप्रपाले पुरानै नाममा जोड दिएको छ । उसले चुनाव चिन्ह् पनि हलो नै राख्न खोजेको छ । तर विवेकशील साझाले राप्रपाको […]
काठमाडौं, ६ चैत्र । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र राप्रपामा प्रवेश गर्ने भएका छन् । आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी छिन्नभिन्न हुन लागेपछि मिश्र भने राप्रपामा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । पछिल्लो समय मिश्र र मिलन पाण्डेबीच द्धन्द्ध चर्किएको थियो। मिश्रले पाण्डेलाई मिलन पाण्डे पक्षका २६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरेका थिए। लगत्तै, पाण्डे समूहले […]
रवीन्द्र मिश्र : शक्तिको आशले विसर्जनको बाटोतिर
ठूला राजनीतिक दलहरूभित्र कतिपय नेताले बेलाबखत वकालत गर्दै आए पनि व्यवहारमा अस्वीकृत दक्षिणपन्थी मत तान्दै आगामी चुनावबाट ‘शक्ति’ आर्जन गर्ने सुरमा रवीन्द्र मिश्र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताविरोधी खेमामा उभिन पुगेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा पुराना पार्टीहरूको भीडभाडमा केही वर्षयता वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबीका साथ ‘विवेकशील साझा पार्टी’ पनि हाजिर छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, मधेसवादी र राप्रपाजस्ता दलहरु हुँदाहुँदै रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टी किन चाहियो ? यो पार्टीको वैचारिक र सांगठनिक ‘स्पेस’ के हो ? यो आइडियोजिकल प्रश्न लिएर हामी अध्यक्ष मिश्रलाई भेट्न उनको हेडक्वार्टरमा पुग्यौं । पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीमा देखिएको विवाद, यहीसाता कतिपय समूहसँग विवेक
निर्वाचन आयोगले दियो रवीन्द्र मिश्र पक्षलाई वैधता
१७ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको वैधाता अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षलाई दिएको छ । मिश्रको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति १२४ सदस्यीय कायम गरेको थियो । त्यसअनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ । विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानमा संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार […]
विवेकशील साझा : रवीन्द्र मिश्र पक्षद्वारा मार्ग परिवर्तन दस्तावेज पारित
विवेकशील साझाले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र मार्ग परिवर्तन दस्तावेज पारित गरेको छ । विहीबार बसेको मिश्र पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले “मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश ” लाई अङ्गीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयलाई पार्टीको दुई–तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको प्रवक्ता शरदराज पाठक जानकारी दिए ।स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै सङ्घीयता खारेजी तथा धर्म निरपेक्षतामाथि जनमत सङ्ग्रहको माग राख्दै तयार पारिएको उक्त दस्ताबेजलाई केन्द्रीय समितिका १२४ सदस्यमध्ये बैठकमा उपस्थि
समानान्तर गतिविधि नराेकिए कारबाही गर्छाैँ - रवीन्द्र मिश्र पक्ष
काठमाण्डाै – विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले समानान्तर गतिविधि नरोकिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।मिश्र पक्षीय केन्द्रीय कमिटीकाे आज बिहीवार बसेकाे बैठकले संयोजक मिलन पाण्डे पक्षका नेताहरूलाई सचेत गराउँदै समानान्तर गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले जानकारी दिनुभयो । बैठकले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित टिप्पणी गर्नेलाई पनि त्यस्तो गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ ।मिश्र पक्षको बैठकमा एक सय एक जना सदस्य सहभागी थिए । पाण्डे पक्षको बैठकमा ४१ जना सदस्य ...
विवेकशील साझा पार्टीमा फेरि विवाद बढेको छ । खासगरी पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेबीच बढेको विवादले पार्टी पुनः विभाजनको संघारमा धकेलिएको छ । अध्यक्ष मिश्रले केही पहिले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज पछि दुई पक्षबीच चलेको विवादका कारण बैठक समेत अलग–अलग आह्वान गरिएको छ ।अध्यक्ष मिश्रले मंगलबार आगामी भदौ १७ गते बिहीबार साढे १२ बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएलगत्तै संयोजक पाण्डेले पनि सोही दिन ११ बजेलाई समानान्तर बैठक बोलाएका छन् ।‘अध्यक्षले सहमतिका आधारमा
विवेकशील साझामा रवीन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेबीच शक्ति संघर्ष
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीमा स‌योजकद्वय रवीन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेबीच शक्ति संघर्ष चर्किएको छ । एमाले र जनता समाजवादी विभाजन भएलगत्तै आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दाबी गर्ने विवेकशील साझा पनि दुई चिरा हुने बाटोमा अघि बढ्न थालेको छ। मिश्रले संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा जनमतसंग्रह र राजतन्त्रलाई विशेष शक्तिका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव गरेपछि […] The post विवेकशील साझामा रवीन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेबीच शक्ति संघर्ष appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.